Dr. Gaboose Oo Ka Digay Dib U Dhac Ku Yimaada Doorashooyinka Golayaasha Deegaanka , Dhaliilna U Jeediyay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN) Gudoomiyaha Urur siyaasadeedka la baxay UMMADA, Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, ayaa ka digay inay doorashooyinka golayaasha deegaanka Somaliland dib u dhacaan. Sidoo kalena ay doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxtooyada ku yeeshaan saamayn
oo dib u riixaan.
Dr. Gaboose, wuxuu sidoo kale usoo jeediyay xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo inay lagama maarmaan tahay qabashada doorashooyinka golaaysha deegaanka oo uu sheegay inay marar baddan dib u dheceen, isla markaana golayaasha deegaanku noqdeen kuwo aan sharci ku fadhiyin oo musuq-maasuq ragaadiyay, isagoo xukuumadda usoo jeediyay eedo uu kula xidhiidhiyay inay doonayaan dib u dhaca doorashada.
Gudoomiyaha Urur siyaasadeedka UMMADA, Dr. Gaboose, wuxuu sidaa ku sheegay qoraal saxaafada loo qaybiyay oo uu kaga hadlayo arrimahaa, kaaso oo u qornaa sidan:- “ Doorashada dowladaha hoose waa tan ugu muhiimsan uguna baaxad weyn doorashooyinka dalka ka dhaca. Waa seeska Dimuqraadiyadda Somaliland. Fursadna u ah muwaadin kasta oo hiigsanaya himiladiisa siyaasadeed. Waxaa doorashadan ka abuurma xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo saddexda Xisbi Qaran, waxayna gogol xaadh u tahay doorashada Madaxtooyada.
Waxa nasiib-darro ah, in doorashadii dawladaha hoose ee ugu horeysey uguna danbeysey ay ka qabsoontay dalka 2002-dii (toban sano ka hor), taasoo laga dheehan karo inay muddo dheer golayaasha deegaanku ku fadhiyaan, kuna maamulaan dalka sharci-darro. Waxay noqdeen aalad u nugul musuqmaasuqa iyo in looga taliyo Qasriga Madaxtooyada, taasoo ka saartey meesha madaxbanaanidoodii iyo la xisaabtankii dadweynaha. Sida caadada u noqotay doorashooyinka Somaliland, kuwan iyo kuwii horeba, madaxda dalalka musuqmaasuqu aafeeyey, kalsoonina aan ku qabin shacbigoodu inay markale soo doortaan waxay cimri-dherer ka dhigtaan xaalad abuur, dhaqaale la’aan, qabyo-tir sharci IWM.
Waxay bulshadu xasuusantahay ka soo guryo-noqoshadaadii Dubai, inaad heshiiskii idin dhex maray adiga iyo Sheikh Shariif kaga sharci gareysey labada aqal mudo saacado gudohood ah, mudnaanta ay kuu lahayd awgeed. “ ayuu yidhi Dr. Gaboose.
Published August 5, 2012 By info
Sarkaal Ka Tirsan Wasaaradda Warfaafinta Oo Xoriyadiisa Loo Celiyay Kadib Markii Hanti-dhawrka Guud Ku Fashilmay Baadhis Musuq-maasuq Oo Uu Ka Socotay Wasaaradda